.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Smart SWF Player Pro for Android
Smart SWF Player Pro for Android
Android ဖုန်းတွေမှာ Flash Song တွေ ဖွင့်ပြီး နားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ Smart SWF Player Pro ဆိုတဲ့ App လေးက
တော်တော်လေးကို ကောင်းပါတယ်။ Play/Stop Button တွေ ထည့်ထားရင်တောင်မှ ဖွင့်ပြီး နားထောင်နိုင်ပါတယ်ဗျာ..။
Flash Game တွေ ဆော့ချင်ရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ခုတင်ပေးလိုက်တာက Pro Version လေးပါ။ လိုချင်တယ်ဆိုရင်
အောက်မှာ ဒေါင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း 264 KB ပဲ ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ App Screenshot လေးတွေရော
ပြပေးထားပါတယ်။ ( မှတ်ချက်။ ။ SWF ဖိုင်များဖွင့်ရန်အတွက် ကိုယ့်ဖုန်းမှာ Adobe Flash Player ထည့်ထားဖို့တော့
လိုပါသေးတယ်။ ) မရှိသေးရင်လည်း အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့..။
Download: Smart SWF Player Pro for Android
ကျွန်တော် စမ်းဖွင့်ကြည့်ထားတဲ့ SWF ဖိုင်တွေကတော့ Double Tun ဖန်တီးထားတဲ့ မင်းအနား ဆိုတဲ့သီချင်းလေးရယ်၊
Welcome Flash ဖိုင်လေးရယ်၊ မိုးကဗျာ ဖန်တီးထားတဲ့ စိုင်းစိုင်းရဲ့ I Love You ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ Talking Tom Cat တို့ပါ။
ခုလို ကျွန်တော့် Blog လေးကို လာရောက်အားပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းမောင်နှမအားလုံးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း..။
Labels: Android App, Flash Song